I-Taurus ngumqondiso wesimo somzimba, okwenza kube nzima ukuphawula ukuba indawo iyajika, kwaye i-stagnation enzima ibeka kuyo.
I-Bull ithanda ukudlula ubomi ngokukhawuleza nangokukhawuleza, inxenye kuba ingumqondiso weemvakalelo ezintlanu eziqaphileyo, kwaye ungenayo yonke into. Xa iTaurus ixinezelekile, isimo saso siza kuhlola, kwaye uphawu olulodwa luya inert.
Bahlala belele ngokukhululekile, baze baphumele ekusebenzeni.
Kodwa i-inertia engapheliyo yintsikelelo yabo.
Ukulala lonke ixesha likhulu eliphambili, ukuba ukuthambekela kweTaurus kwi-malaise kuthathe ukuguquka kwamnyama. Kwaye, kunjalo nokuba yintoni abayidingayo ukubuyela ezweni labaphilayo.
Uninzi lweeBull ziyimfihlo kunye neemvakalelo zabo, kwaye unesigqeba esincinci sabathengi abathembekileyo. Baye banesineke-kwaye banenkani - nantoni na eyenzekayo. Kungakhathaliseki ukuba yintoni, bafuna ukujongana nayo ngendlela yabo.
I-Taurus Shakespeare eyabhalwa kwi-Macbeth yabhala oku kulungiswa kokulala.
Ubuthongo obudibanisa umgca wokunyamekela,
Ukufa kwimihla ngemihla, kubhebha kubasebenzi,
I-balm yeengqondo eziphazamisayo, iklasi yesibili yendalo,
Umondli oyiNtloko kwisidlo somphefumlo.
Isizathu Sokunyuka Ekuseni
Ngaba ukulala ubuhle kuya kuvuka? Oku kuxhomekeke ekubeni kubonakala kunelungelo okanye cha.
I-Taurus ilawulwa yiVenus, kwaye ifuna ubuhle, uxolo kunye nokuziva uxabiseke.
Ukuba u-Taurus ogxininisekile, qwalasela iindawo ezikuyo-kukho ubuhle obukujikelezile? Fumana izikhombisi ukusuka kwisibonakaliso sakho seVenus.
Kuthiwa utshintsho lufana nokuphumla, kwaye utshintsho lwendawo luyakwazi ukuvusa iingqondo, kwaye uphume ngaphandle kwe-funk.
Xa unamathele kwiindawo apho uluntu lukhulu khona, luyathuthuzela.
Kodwa cinga ngeendlela zokuhlala zeendawo ohlala kuzo emini - kwaye ukuba zidibana nemigangatho yakho.
Ndabona umfana enxibe i-t-shirt enelo myalezo kanye, kwaye kwamenza ndomamatheka. I-Taurus inomdla kwaye ivumela isimo sengqondo sokuphila, kunye nesimo esibonakalayo esilula. Kodwa i-Bull iqala ukugubha kunye nokufumba, xa iphoqelelwe ukuba ibe ngabantu abangathandiyo.
Ubume bakho bubunokuthula, kwaye ngulokho olunye uvumelwano olufunayo. Ukuba uhlala nabantu abahlekisayo abanokukuxhatshaza kwaye bangene kwi shishini lakho, oko kuthatha umthwalo omkhulu.
Unokukwazi ukufihla malunga nebalaseleyo, yoluntu oluphezulu, loluntu oluvakalayo nolugqubutha. Ukuzenzela kwakho kungathatha ukubetha, ukuba usemthunzini womntu obonakala eyala indawo.
Udinga indawo yokuvula kwaye oko kuthetha ukuziva ukhuselekile, kwaye uhloniphekile ukuba ungubani. Ingqungqungquthela yokuba ube ngabantu abakuqhaqhazelayo, kwaye bakucinezele ukuba uvumelane nesingqimba sabo.
Ukuvutha komsindo kuphendukele ukucaphukisa, ngoko kukudandatheka, ukuba akubonakali. Uhlobo oluthile lweTaurus lithetha ukuba ungafika kwizigqibo "ezilungelelaniswayo" kwimeko engenathemba.
Imiqondiso yeTaurus Depression:
Ukukhuseleka okukhulu, kunye nokuchaswa kwezicwangciso zonke.
Ukukhusela kwisigxina somsebenzi kunye nokulala.
Imvakalelo yokupheliswa ngokuqinileyo, ayikwazi ukwenza utshintsho.
Ukugqithisa kwizinto ezinonophelo kwiinjongo zobutye.
Ukuvala yonke into, nokuba ngabahlobo abasondeleyo.
Indlela yokuphuma kwi-funk kulabo abane-Taurus amandla, ikhona ngentsingiselo. Kwaye njengomqondiso wehlabathi , uhlobo luyiqhawe lakho kunye nomlingani.
Naluphina uhlobo lwe- aromatherapy lunokuphakamisa indlela yakho yokuzonwabisa, kuquka ukupheka okanye ukupheka ukutya okuthandayo.
Ukuba uziva ulahlekile, misela ukuphulaphula umzimba wakho, kwaye uyiphatha ngothando, unonophelo. Isilumkiso okanye esinye iseshoni esekelwe kumzimba sinokukuphazamisa. Jonga kwakhona xa kunomhlaba onobukhulu, okanye obuncinane.
Iziphakamiso zokuPhulukiswa kweTaurus Energy Depression
Cwangcisa into enye ukujonga phambili.
Beka imida emitsha nabantu abakuchukumisayo.
Yichitha ixesha kunye nomntu othi "ufumana".
Yenza imifanekiso emihle, ubugcisa, umculo, iifilimu, iimpahla, njl njl.
I-Aries in Love - Ukudibanisa iZodiac
Izipho ezintathu zobuGemini
I-Libra Dark Side
I-Dark Side yeCapricorn
Iimigaqo-mithetho yeGolf ezayo ngo-2019
I-Creepiest Oldies Iingoma zexesha lonke
Iiprofayile zezilwanyana A ukuya kuZ: ngegama eliqhelekileyo
Isingeniso seNkcazo yeNzala
Fundisa u-2016 Ukhetho: Ukufunda Abaviwa kunye neengxaki
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: iMfazwe yeKarillon
Ukuqhagamshelana neNgelosi yakho yokuqinisekisa: Ukuvakalisa ukubonga